Gweta rinodiwa riini? - Law & More B.V.
Gweta rinodiwa riini?
Wagamuchira masamanisi uye unofanira kukurumidza kumira pamberi pemutongi achatonga nyaya yako kana ungangoda kutanga maitiro iwe pachako. Kuhaya gweta kuti akubatsire rini mumakakatanwa ako epamutemo sarudzo uye kupi kuripira gweta rinosungirwa? Mhinduro kumubvunzo uyu inoenderana nerudzi rwekupokana urikatarisana narwo.
Kana zvasvika pakutongwa kwematsotsi, kubatanidzwa kwegweta hakutombomanikidzirwa. Mukutongwa kwemhosva, bato rinopikisa harisi mugari wemo kana sangano asi Public Prosecution Service. Mutumbi uyu unoona kuti mhosva dzematsotsi dzaonekwa nekupomerwa nekushanda pamwe chete nemapurisa. Kana mumwe akagashira masamanisi kubva kuPublic Prosecution Service, anoonekwa seanofungidzirwa uye muchuchisi weruzhinji afunga kumuripisa mhosva yekupara mhosva.
Kunyangwe zvisiri zvekumanikidzwa kubatanidza gweta mukutongwa kwematsotsi, zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti udaro. Pamusoro pekuti magweta ane hunyanzvi uye anogona kunyatsomiririra zvaunofarira, (zvepamutemo) zvikanganiso zvinowanzoitwa panguva yekuferefeta, semuenzaniso, mapurisa. Kuziva izvi, zvinowanzo zadzwa zviri pamutemo, zvikanganiso zvinoda ruzivo rwehunyanzvi gweta rine uye mune dzimwe nguva kutungamira kune hukuru hutonge pamutongo wekupedzisira, sekuregererwa. Gweta rinogona zvakare kuvapo panguva yekubvunzurudzwa kwako (uye nekubvunzurudzwa kwezvapupu) uye nekudaro uve nechokwadi chekodzero dzako.
Kubatanidzwa kwegweta hakusi kwekumanikidza mukutongwa kwemasangano ehurumende kana paunokwidza nyaya kuCentral Appeals Tribunal kana Administrative Jurisdiction Division yeKanzuru yeHurumende. Semugari kana sangano unopesana nehurumende, senge IND, zviremera zvemitero, masipala, nezvimwewo muzvinhu zvine chekuita nemari yako, bhenefiti uye mvumo yekugara.
Kuhaya gweta zvakadaro sarudzo yehungwaru. Gweta rinogona kufungidzira nemazvo mikana yako yekubudirira kana uchinyora kuramba kana kutanga maitiro uye anoziva kuti nharo dzipi dzinofanirwa kuiswa pamberi. Gweta rinozivawo izvo zvepamutemo zvinodiwa uye nguva miganho inoshanda mumutemo wekutonga uye nekudaro anogona kubata maitiro ehutongi nemazvo.
Mhosva yehurumende inosanganisira kukakavadzana pakati pevanhu vakazvimirira uye / kana masangano emitemo ega. Mhinduro kumubvunzo wekuti rubatsiro rwegweta runosungirwa here rwakaomarara mumatare ehurumende.
Kana maitiro acho akamirira pamberi pedare redunhu, kuva negweta hachisi chisungo. Dare repasi pehutongi rine hutongi mumatare ane (anofungidzirwa) kuda kwemari isingasviki 25,000 XNUMX euros uye nyaya dzese dzekushandira, nyaya dzekurenda, madiki emhosva uye nharo pamusoro pevatengi chikwereti nekutenga kwevatengi. Mune dzimwe dzese nyaya, maitiro ari mudare kana mudare rekukwirira, izvo zvinoita kuti zvimanikidze kuve negweta.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, zvinokwanisika mune yehurumende nyaya kukumbira dare kuti rikurumidze (zvenguva pfupi) danho mune yekukurumidza nzira. Maitiro echimbichimbi anozivikanwawo sepfupiso kuenderera. Mumwe anogona kufunga nezve, semuenzaniso, pfupiso inoitika ye'Viruswaarheid 'nezve kumiswa kwekutora nguva.
Kana iwe ukatanga kupfupisa kutongwa iwe pachako kudare redzimhosva, zvinosungirwa kuve negweta. Izvi hazvisizvo kana kutongwa kwacho kuchikwanisa kutanga mudare redunhu kana kuti uchizvidzivirira muchidimbu nyaya inopokana newe.
Kunyangwe kuita gweta kusiri kwekumanikidza nguva dzose, zvinowanzo kurairwa. Magweta anowanzoziva ese ins nekubuda kwebasa uye nemabatiro avangaite nyaya yako kumhedziso inobudirira. Nekudaro, kuita gweta hakungobatsire chete kana uchifanira kana uchida kuenda kucourt. Funga, semuenzaniso, nezve chiziviso chekupokana nehurumende yehurumende kana faindi, chiziviso chekutadza nekuda kwekusaita kana kudzivirirwa kana uri munjodzi yekudzingwa. Kupa ruzivo rwake rwepamutemo uye hunyanzvi, kuita gweta kunokupa iwe mukana wakanyanya wekubudirira.
Iwe unofunga iwe unoda here zano rehunyanzvi kana rubatsiro rwemutemo kubva kune nyanzvi gweta mushure mekuverenga chinyorwa? Ndapota usazeza kutaura Law & More. Law & More'' Magweta inyanzvi munzvimbo dzinotaurwa pamusoro apa uye vanofara kukubatsira nerunhare kana e-mail.
pashure «Gweta rinoitei?